Advisement about the - 영어 - 버마어 번역 및 예문
검색어: advisement about the air track experiment (영어 - 버마어)
What about the rain?မိုေရကို်အာကား
ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ စပြီး တချိန်တည်းလိုလိုပဲ အဖျား တက်လာတယ်
Foramoment, the news about the checkpoint came asashock.
ယင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ ဘ၀ကို ပြီးဆုံးစေခဲ့သောသူတို့၏ အကြွင်းမဲ့ နိဂုံးဟု အနက်ဆောင်ပါသည်။
The blog also talked about the drowning ofayoung man from Sankrafah:
အဲဒီ ရေကြီးမှုကြောင့် အနည်းဆုံးအိမ်ထောင်စု၃၀၀ကျော်က ရေဘေးဒုက္ခသည်ဘ၀ရောက်သွားပါတယ်။
အမြစ်အားဖြင့် စမ်းရေတွင်းကိုဝိုင်း၍ ကျောက် ထူသောအရပ်ကို တွေ့မြင်လျက်ရှိသော်လည်း၊
I think we should never forget about the history and origins of this tradition.
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအစဉ်အလာရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ မြစ်ဖျားခံရာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်တော့မှ မမေ့သင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။
အနှစ်လေးဆယ်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး တော၌ ကျွေးမွေးတော်မူ၏။
မရဏာနိုင်ငံ၏ ကြိုးတို့သည်ဝိုင်း၍၊ သေမင်း၏ ကျော့ကွင်းသည် ငါ့ကိုကျော့မိလျက် ရှိ၏။
Kankossatoday blog also talked about the displacement of 30 families in one of the villages:
တစ်ဖန် Kankossatoday ဘလော့(ဂ်)သည်လည်း အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၀) အခြားရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရပုံကို ပြောဆိုတင်ပြထားသည်။
မရဏာနိုင်ငံ၏ ကြိုးတို့သည် ဝိုင်း၍ သေမင်း၏ ကျော့ကွင်းသည် ငါ့ကို ကျော့မိလျက် ရှိ၏။
John Weeks createdaslideshow presentation about the history of Cambodian comics in the past half century.
ဂျွန် ဝိ(ခ်)(စ်ခ)က ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းက ကမ္ဘောဒီးယား ရုပ်ပြစာအုပ်တွေရဲ့ သမိုင်းအကြောင်း တင်ဆက်ပြသတဲ့ ဆလိုက်ရှိုးတစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဆယ်တနာရီအချိန်၌ ဝင်သောသူတို့သည်လာ၍ ဒေနာရိတပြားစီ ခံကြ၏။
တံခါးပတ်လည် တန်တိုင်းအတွင်း၊ ထောင့်တိုင် အထိ၊ အတောင်ခြောက်ဆယ်ကျယ်အောင် တိုင်များကို ထားလေ၏။
ephrata (라틴어>프랑스어)hats off to you brother (영어>힌디어)opstel ek is nie perfek nie (아프리칸스어>영어)reģionalizācija (라트비아어>영어)orri (바스크어>스페인어)xylella (영어>스페인어)ami tomake khabo (벵골어>영어)nocciolata (이탈리아어>프랑스어)kasalungat na salita ng landas (타갈로그어>영어)in tempora china omnia strunza natant (라틴어>이탈리아어)pobrinucu (세르비아어>인도네시아어)i wish u were here (영어>힌디어)kerajinan (말레이어>중국어(간체자))laatstgebruikte (네덜란드어>독일어)kideri ungojwa wa kuku (스와힐리어>영어)parents (힌디어>영어)amma irukanga (타밀어>영어)asolit (카탈로니아어>스페인어)dónde quedamos (스페인어>영어)hum thik hai aap batao kaise ho (힌디어>영어)mandello (이탈리아어>영어)mai tumhe hamesha khush rakhunga (힌디어>영어)portant (라틴어>스페인어)translate kadazan to malay language (말레이어>영어)